Vetivety teo dia reraka sy nalemy, nisalebolebo ary nihavery saina izy ireo. Niantso ilay mpiambina faingana mba handray ny vola tamin’ny sakaosy ary nampaka fiarakaretsaka hitondra azy ireo hihazo ny toeram-pitsaboana, andro vitsy lasa izay. Avotra soa aman-tsara izy ireo, raha ny loharanom-baovao azo antoka. Raha tara kely dia torana tanteraka ka notavanin’ireo tsy matahotody ny vola ary nahiana hatramin’ny ainy. Olom-pantatra sy mpifanerasera izay mpifaninana ara-barotra eo ihany ireo voarohirohy nifofo ny ainy. Voalaza fa efa nandefa fitarainana sy fitoriana any amin’ny mpitandro filaminana ireo voapoizina. Lasibatry ny olon-dratsy hatrany ireo mpiasan’ny cash point. Tsy vitsy ireo afak’aina notifirina an-kitsirano, ao koa ireo nalaina an-keriny ho takalon’aina tahaka ilay teo Analakely. Miandrandra fandraisana andraikitry ny fanjakana amin’ireo kioska mikirakira vola izay tsy ara-dalàna ny fiarovana ny mpanara-baovao. Ny banky sy ny fiaran’ny banky tsy laitram-bala, tahaka ilay teny Ambohimanambola aza mantsy tafihin’ireo jiolahy.